Saldhigyo Shabaab lahaayeen oo lagu bur buriyay Jubooyinka. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Ciidamada Xooga Soomaaliya oo garab ka helaya Ciidamo Mareykan ah ayaa maanta Saldhigyo Kooxda Al-shabaab ay ku la haayeen deegaanada Kamsuuma, Jamaame, Kaban iyo kuwo kale oo ka tirsan gobolada Jubada Hoose iyo Jubbada dhexe ku bur buriyay halkaasi.
Ciidamadaan oo deegaanadaas ku qaaday weerar qorsheysan ayaa bur buriyay saldhigyo Al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi sida Saraakiisha Ciidamada Soomaaliya hogaaminyay ay tilmaameen.
Weerarka ayaa isgugu jiray mid ciraka ah iyo sido kale dagaal dhulka ah, waxaana ay taliska ciidanka xooga uu sheegayaa in ay bur buriyeen dhamaan saldhigyo Al- shabaab ku lahaayeen deegaanada kamsuuma , jamaame Kaban iyo duleedka Baarsanguuni ayna ku dileen 25 isugu jira saraakiil iyo dagalamyaal ka tirsanay Kooxda shabaab ah.
Saraakiisha ayaa sidoo kale sheegay in wali dagaal uu ka socoyo deegaanka Baarsanguudo oo aan sidaas ugu fogeyn magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG ah ee maamulka Jubbaland.
Taliyaha qeybta 43Aad ee ciidanka xoogga dalka General Cismaciil Saxardiid oo la hadlay idaacad ku hadashada afka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa sheegay in howlgalada ay si wadajir ah ay u fuliyeen ciidamada Danab ee Milatariga Soomaalia iyo ciidamo Mareykan ah.
Al-shabaab oo looga bartay in ay wararka la xririia dagaalada ku qoraan warbaahintooda ayaa wali ka soo saarin wax war ah.
Balse warar madaxbanan ayaa sheegaya in dhanka ciidamada dowlada laga dilay dhowr asakri kuwo kalane ay dhaacmeen.
Dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada dagaalka uu ka dhacay iyo kuwa uu haatan ka socto ee Jubooyinka ayaa waxaa ay inoo sheegeen in ay maqleen daryanka madaafiic culus oo qaarkood ahaayeen duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay fulinayeen.
Dagaalka maanta wuxuu yimid kadib weerar Al-shabaab ay shalay ku qadeen ciidamo ka tirsan dowlada Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayna ka shegteen Guulo